Biyo-qaybiyeyaasha Service Adeegga Caafimaadka • Isbitaal • Xafiis • Xarun Caafimaad
Miyaad u baahan tahay biyo-bixiye isbitaal, xafiiska dhakhtarka, rugta caafimaad? Shirkadda Water Point ayaa bixisa Biyo-siinnada Biyo-la’aanta ah, cabbayaasha, isha laga helo hogaamiyayaasha adduunka ee warshadaha, oo aan annaga u nahay qaybiyaha gaarka ah ee Poland.
Cisbitaalada, rugaha caafimaadka iyo nadaafadda waa meelaha ay dadka ugu baahan daryeel gaar ah iyo daryeel ku saabsan joogitaankooda caafimaad. Mararka qaarkood waqtiga sugitaanka ee habraaca ayaa dheer. Waxa kale oo jira kiisas ay bukaanjiifyadu ku jiri karaan xarun daryeel caafimaad la siiyay maalmo, toddobaadyo ama xitaa bilo.
Waxay had iyo jeer dhacdaa in cunno iyo cabitaanno dheeri ah oo loogu talagalay bukaannada ama maxaabiista ay bixiyaan qoyska dhow ama xitaa asxaabta. Si kastaba ha noqotee, kani kuma filna. Waxaad sidoo kale ubaahantahay marin joogto ah cuntada cusub, dhadhan fiican leh iyo caafimaad leh biyo, oo bilaash looga heli karo qof kasta oo booqda cisbitaal ama xarun caafimaad, iyo sidoo kale dhammaan booqdayaasha iyo shaqaalaha.
Waxaan u soo jeedinaynaa gaar ahaan dadkaan Biyo-waraabeyaasha biyaha cabbi kara loogu talagalay isbitaalada iyo tas-hiilaadka daryeelka caafimaadka halkaas oo biyuhu ay ku habboon yihiin heerar aad u adag. Bixiyeyaasha biyaha ee isbitaalada ayaa ah xalka lagu kalsoonaan karo oo awood u leh inay siiyaan bukaanka, booqdayaasha iyo shaqaalaha biyo tayo sare leh oo la cabo oo dhadhan fiican leh.
Thanks to xalka xirfadlayaasha, biyo-waraabiyaha biyo-cabbiyeyaasha ayaa xaqiijin kara nadaafadda iyo amniga isticmaalka.
Biyo la’aan, biyo caafimaad qaba waxay kordhin doontaa tayada adeegyada caafimaadka, iyo qiimaha ku shaqeynta aaladda noocan oo kale ah runtii waa yar tahay.
Biyo-cabiyayaasha, ilaha iyo ilaha waxay bixiyaan biyo nadiif ah oo nadiif ah oo buuxiya shuruudaha nadaafadda iyo cudurrada faafa.
Intaa waxaa sii dheer, aaladahaani waa xarrago oo casri ah, isticmaalkooduna waa sahlan yahay, xitaa carruurta iyo waayeelka.
Biyo-cabeyaasha biyaha la cabi karo waxaa lagu meelayn karaa waddooyinka, qolalka sugitaanka iyo meelaha la wadaago. Waxaa loogu talagalay inay hubiyaan raaxada isticmaalka iyo isla mar ahaantaana ha u keenin khatar microbiological. Waxaa sidoo kale loo isticmaali karaa xafiisyada iyo xafiisyada.
Biyo nadiif ah oo dhadhan fiican leh ayaa dammaanad u ah caafimaadkeena iyo gaar ahaan dadka jiran ama daciifa, iyo sidoo kale shaqaalaha iyo dadka ku lugta leh daryeelka dadka jiran waa inay si fudud u heli karaan.
Qalabka biyaha la cabbo waxaa laga sameeyaa qalabka ugu tayada sareeya, kaas oo hubiya xaalad farsamo oo aad u fiican iyo muuqaalka qalabka muddo dheer. Naqshadeynta casriga ahi waxay ku habboon tahay goob kasta oo dadweyne ah iyo sidoo kale isbitaalada, xarumaha caafimaadka iyo goobaha caafimaadka ayaa noqon doona oo keliya xal wax ku ool ah, laakiin sidoo kale qurxin meel la siiyay ah.
Bixiyeyaasha waxay adeegsadaan nidaam horumarsan si ay uga difaacaan daadinta biyaha aan la xakameyn iyo ilaalin munaasib ah.
Biyo-cabista biyo-gelinta ee laga sameeyay cisbitaalada waxay badbaadiyaan waqti iyo meel, sidoo kale waxay saameyn wanaagsan ku yeeshaan deegaanka.
Qalabkan casriga ahi waxay siiyaan biyo cad oo cad saacad kasta dadka jooga cosbitaalka, kiliniig ama xanaanada caafimaadka.
Sidoo kale waa xallinta aasaaska dabiiciga ah iyo dhaqaale, maxaa yeelay maahan inaad ka walwasho qaadidda dhalo biyo ah tiro badan, keydkooda ka dibna dib u warshadaynta qashinka.
mashiinka iibinta biyahabiyo bilaash ah oo cisbitaaladaBixiyeyaasha biyahaBixiyeyaasha biyahaBixiyeyaasha biyahaBixiyeyaasha kaarboon-gaaska lehBixiyeyaasha biyaha ee isbitaalkabiyaha kirada bixiyaha ahtuubada biyaha tuuraBixiyeyaasha biyahaisbitaalka biyaha laga cabobiyo xireenkaqaboojiyaha biyo-diiyahamashiinka biyo-gelintakhamri cabayaasha ee cisbitaalkaaaladda loogu talagalay biyo macaanaaladda biyaha karbohaydraydbiyo loogu talagalay daryeelka caafimaadkabiyo caafimaadbiyo loogu talagalay isbitaaladabiyaha tuubbada ka soo baxabiyaha xafiiska dhakhtarkabiyo ku jira rug caafimaadbiyaha guga